Aogositra 1, 2001 - Ellicott Dredges
Aogositra 2001 HO AN'IZAO FAMPIOVANA AZONY ny dredge azo fehezina indrindra azo namboarina. Ny fivoahana 8cm (203 mm) vaovao, dredge tohatra mandeha amin'ny herinaratra (SLD) ho an'ny fitrandrahana fanoratana sy ny fikojakojana rano miaraka amin'ny kalesy telo (3), ary tsy misy tariby. Ellicott® International, mpamokatra dredge lehibe amin'ny fametrahana ny dredge amin'ny tontolo iainana, manambara karazana dredge vaovao izay mandeha irery. Mivezivezy amin'ny fiara mihetsiketsika telo na kalesy mivezivezy ny dredge ahafahana mijanona ao amin'ny toerana misy azy amin'ny fotoana rehetra satria misy sakeloka roa foana mifono ao ambany. Miaraka amin'ny hala-bato izy raha mbola mitsingevana. Ity toerana ity ...